I-PollSnack: Yenza iiPoll ezilula, ezenziwe ngokwezifiso kwiFacebook | Martech Zone
NgeCawa, nge-25 kaJanuwari 2015 NgoMgqibelo, uJanuwari 14, 2017 Douglas Karr
IPollSnack sisixhobo esilula kwi-intanethi seevoti kunye nophando, esikuvumela ukuba wenze kwaye uqhube iphepha lemibuzo lemarike ngaphandle kokufunda isoftware enzima. Ukunika ingxelo yophando kulula kwaye kuyacaca, kwaye iziphumo ziboniswa ngexesha langempela.
Ungayifaka njani iPoll elula kwiFacebook
Nantsi ividiyo emfutshane malunga nendlela onokusebenzisa ngayo iPollSnack ukufaka i-poll okanye uphononongo ngokulula ngaphakathi kwe-Facebook. Iziphumo zokuvota zinokufakwa kwibhlog, okanye kwabelwane ngazo kuTwitter okanye nge-imeyile.
Yenza ngokwezifiso inkangeleko yovoto lwakho kunye nophando lweewijethi.
Yenza iipolls kunye nophando kulo naluphi na ulwimi onqwenela ngalo.
Shumeka iipoll kwiwebhusayithi yakho.
Gcina idatha yakho ngokukhuselekileyo ngexesha lokuphila kweakhawunti yakho.
Sebenzisa ikhonkco lethu lokudibana kwaye ufumane I-30% icinyiwe umrhumo wonyaka omnye wePollSnack Pro cwangciso.
tags: uphando lweblogI-facebook polluphando lwe-facebookpollukhethoUphando lwe-twitter